Alexis Sanchez Oo Faah Faahin Ka Bixiyay Wixii Pep Guardiola Uu Kulankiisii Ugu Danbeeyay Ee Barcelona Uu Qolka Labiska Ugu Sheegay Iyo Wixii Uu Ka Bartay. – WWW.Gool24.net
Alexis Sanchez Oo Faah Faahin Ka Bixiyay Wixii Pep Guardiola Uu Kulankiisii Ugu Danbeeyay Ee Barcelona Uu Qolka Labiska Ugu Sheegay Iyo Wixii Uu Ka Bartay.
Xidiga xulka qaranka Chile iyo kooxda Arsenal ee Alexis Sanchez ayaa ka sheekeeyay wixii uu Pep Guardiola u sheegay ciyaartoydii kooxdiisii Barcelona ee kulankiisii ugu danbeeyay. Sanchez ayaa ka mid ahaa kooxdii Barcelona ee uu Guardiola macasalaameeyay sanadkii 2012 kii wuxuuna xidiga ree Chile uu faah faahin ka bixiyay waxyaabihii uu Guardiola ka sheegay qolka labiska Barcelona ka hor finalkii Copa Del Rey.
Guardiola ayaa Barcelona maamulayay kulankiisii ugu danbeeyay markii ay sanadkii 2012 kii la ciyaaraysay kooxda Athletic Bilbao ee finalkii Copa Del Rey markaas oo ay Balaugrana koobkan ku guulaysatay. Sanchez ayaa sharaxay wixii uu Guardiola ka bartay xili si wayn loola xidhiidhinayo in uu Manchester City kula midoobo.
Alexis Sanchez oo sharaxaya wixii uu Guardiola qolka labiska Barcelona uu u sheegay ayaa yidhi: “Markii ay ahayd kulankii ugu danbeeyay ee ka tababaraha Barcelona, waxa uu isagu kooxda ugu yimid qolka labiska wuxuuna noo sheegay: ‘Ragyahow waxaad gaadheen waxyaabo waa wayn, waxaana mahad ku leh ciyaartoy kasta oo halkan jooga’. Waxaa halkaas joogay ciyaartoyda sida Lionel Messi, Andres Iniesta, Xavi Hernandez, Gerard Pique iyo Carlos Puyol, kuwas oo shaqadooda qabsaday”.
Sanchez oo hadalkan ka sheegay shirkiisa jaraa’id ee ka horeeya finalka Confederations Cupka ayaa isaga oo hadalkiisa sii wata yidhi: ” Haddii ayna shaqadooda qaban lahayn, kadib kooxdu way xumaan lahyd, khibradaasi aniga way ila socotaa. Sanadihii la soo dhaafay waxaan bartay in aan la xaasidin ciyaartoyda aad isku kooxda tihiin”.
Xidiga ree Chile ayaa hadalkiisa ku sii daray: “Qaadhnimadaya ka ciyaartoy anaaneed ayaa aniga ii ogolaatay in aad u dhex galo ciyaartoyda aanu isku kooxda nahay. Haddii aan doonayo in aan heerka shaqsi ahaaneed u guulaysto kadib ciyaartoyda aanu isku kooxda nahay ayaan caawin uga baahanay. Waxaan filayaa in ciyaartoyda aanu isku kooxda nahay ay aniga ii baahan yihiin isla markaana aan anigu u baahanahay iyaga”.
Alexis Sanchez ayaa finalka Germany barbar dhigay finalkii Argentina ee Copa America wuxuuna yidhi: “Markii aanu finalka la ciyaarnay Argentina, ciyaartoy ka ciyaartoy ahaan waxay kooxda fiican Argentina ayay ahayd, laakiin anagu waxaanu nahay koox fiican oo qoys ah, waxay la mid ahayd kulankii Portugal. Ciyaartoy kasta oo kooxdan ka mid ahi qaybtiisa ayuu qabsadaa taasi waxay naga caawisay in aanu wax wayn gaadhno”.